सबैका अगाडी शिर ठाडो पारेर छाती ठोकेर भन्छु … रबि लामिछाने भिडियो सहित !!
देशमा चुनावी माहोल भएपनि आज केही वेर वेमौसमकै बाजा बजाउनु पर्ने भएको छ । आज आफ्नै कुरा गर्न बाध्य भएको छु । म र मसँग रहेको अमेरीकी पासर्पोट बारे सनसनीपुर्ण न्युज,म विदेश गएको बेलामा आएछ । जसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी ठानेको छु । सन् २००२ देखि मैले अमेरीकामा स्थायी बसोबास गर्न सुरु गरेको कुरा मैले कसैलाई लुकाएको छैन । १४ बर्ष अमेरीका बसेको, आफ्नै व्यसाय सञ्चालन गरेको मानिससँग प्रायः त्यहाँको कार्ड,पासर्पोट र अन्य कागजात हुन्छन् नै । यसका लागि कसैको खोजीमुलक पत्रकारीता नै चाहिदैन ।
हुर्कदै गएपछी परीपक्क हुदै गइदो रहेछ । तर मैलेचाहि जानेको कुरा आफ्नै देशमा लगाउँछु भन्ने वाचा आफैलाई गरेको थिए र म कसैलाई देखाउन होइन,हिरो बन्न होइन कसैलाई चुनौती दिन होइन,कसैको भाग खोस्न होइन,कसैको डाह गरेर होइन,कसैको खुट्टा तानेर होइन,कसैप्रती पुर्वग्रह राखेर होइन,कसैलाई जलाउन वा चलाउन सवथोक त्यागेर आएको होइन । माफ गर्नुहोला सरहरु,मानिसको जातै लोभी हुन्छ,खाना खाँदै गर्दा झरेको एक टुक्रा मासुपनि पुछपाछ पारेर कुप्लुक्क मुखमा हाल्छ मान्छे ।
तर तपाई सबैका अगाडी शिर ठाडो पारेर,छाती ठोकेर भन्छु, भएको २÷२ वटा इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइस् डुवाएँ,बर्षको १ लाख डलर आउने एक्सीक्युटीभ जागीर,सुवीधा सम्पन्न गाडीहरु,संसारले लोभ गर्ने अमेरीकी जीवन, ग्रिनकार्ड, पासर्पोट, अत्यन्त राम्रो सामाजीक प्रतिष्ठालाई चटक्कै छोडेर अब देशमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिएर आएको हु । केही बर्ष विदेशमा अल्झीएको हुँ बाटो भुलेको छैन ।
मेरो इतिहास केलाउन अरु थप रिपोर्टर खट्याउनु पर्दैन,मलाई भेट्न आउनुहोस १० मिनेट भित्र म आफ्ना सारा कमजोरीहरु र बदमासीहरु बताइदिन्छु । तपाईको रिर्पोटरले सात पुस्ता सम्म पत्ता लगाउन नसक्ने व्रेकीङ न्युज दिन्छु । अमेरीकी पासर्पोट मात्र हो र मेरो ब्यक्तिगत सम्बन्धहरुको इतिहास अफ मसालेदार हुन्छ होला । सब बताइदिन्छु आउनु होस । सरहरु कुन जमानामा हुनुहन्छ ? २१ आँे सताब्दीमा १४ बर्ष अमेरीका बसेर आफ्नो देश फर्कीएको एउटा संचारर्कीको युएस पासर्पोट छ रे भनेर सनसनीपुर्ण खुलासा गरीरहनुभएको छ ।
पैसा कमाउन विदेश गएको म, आफ्नै मुलुकमा कार्यक्रम चलाएर समाज बदल्न प्रयास गर्छु भनेर विगत ३/४ बर्षदेखी नेपालमा बसेर एक्लै संघर्ष गर्दा मैले १४ बर्ष दुख गरेर जोडेको मेरो व्यवसाय पनि डुब्यो र मेरा अंशमा परेको पुर्खाैली जमिन पनि सकियो । आमा र देशसँग छल गर्नु हुँदैन भन्छन् म मेरा जन्मभुमी मेरो देश नेपाल र आँफुलाई जन्मदिने स्वर्गवासी आमालाई सम्झेर लाइभ टेलीभिजनमा भन्दैछु मैले अमेरीका छोडीसके तर आँफुले त्यत्रो बर्ष कर्म गरेको अमेरीकाको सम्मान मैले गर्नैपर्छ त्यसैले चाडो भन्दा चाडो पासर्पोट बुझाउने क्रममा विगत १ बर्षदेखी लागि परेको छु । १४ बर्षको भारी सजीलै बिसाउन नसकेकोमा को सँग माफी माग्नु पर्ने हो थाहा छैन ।
यति सिम्पल कुरालाई बाघ नै मारे जसरी ३ हात उफ्रेर न्युज बनाइरहनुभएका सबैलाई आफ्नो त्यो अपार क्षमताको प्रर्दशन म बबुरो माथी नगर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । यो कार्यक्रमलाई प्रभाब पार्ने उदेश्यले यसो गर्नुभएको हो भने मलाई माफ गर्नुहोला । त्यस्तो हुन सक्दैन । यो हिलो छ्याप्ने काम बन्द गरौ । बरु सुशासन कायम गर्न र भष्ट्राचर नियन्त्रण गर्न सहकार्य गरौन । त्यसो गरे कसो होला ?
अमेरिकी पासपोर्टका विषयमा रविले लाईभमै बोले । अस्पतालमै नर्सको घाटी यसरी थिचियो ! (पानाखबर)
भान्जा र माईजुलाइ गाउँलेहरुले बस्न नदिने भन्दै रि,सले उर्लिए,मामाले दिए कु,टेर खेदाउने ठाडो चे,तावनी (भिडियो सहित)
भान्जा र माईजुलाइ गाउँलेहरुले बस्न नदिने भन्दै रिसले उर्लिए, दाजुले दिए कुटेर खेदाउने ठाडो चेतावनी (भिडियो सहित)